Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos ka Motorola Droid Bionic
> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos ka Motorola Droid Bionic
Sida loo soo ceshano photos tirtiray ka Motorola Droid Bionic
Marka ay timaado inuu ka soo kabsado photos tirtiray ka Motorola Droid Bionic, waxaa jira laba siyaabood. Mid ka mid ah waxaa diraya aad telefoon ama kaarka SD in ay hay'ad dayactir phone xirfadle ah inuu dib u soo ceshano xogta aad. Kale, Sida ugu raqiisan waxa la helo qalab kabashada sawir lagu kalsoon yahay inaan ku saxno keligaa. Sida caadiga ah, hore ee aad ku kici doona wax badan oo ka mid ah lacag iyo sawiro aad arki doono kuwo kale oo badan. Haddii aadan rabin in uu lacag aad u badan oo ku sii photos kuwa gaarka loo leeyahay, waxay samaynayaan naftaada software kabashada sawir waa habka ugu fiican.
Ma garanayo sida loo helo software lagu kalsoonaan karo soo kabashada sawirka? Halkan waa talo: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac . Waxay tahay 100% lagu kalsoonaan karo oo aad u isticmaali karto version maxkamad lacag la'aan ah si aad u hesho sawiro dhan tirtiray, video iyo files audio ka phone Motorola Droid Bionic ka hor inta aadan soo kabsado iyaga, oo aysan ku kacaysaa dinaar dinaar. Sidoo kale, xirfad farsamo ma loo baahan yahay, waxaad buuxin kartaa shaqada oo dhan 3 talaabooyin fudud.
Download version maxkamada ee xorta ah ee Motorola Droid Bionic software kabashada sawirka hoos ku hadda.
Talaabooyinka inuu ka soo kabsado photos tirtiray ka Motorola Droid Bionic
Step1. Orod software kabashada sawir Motorola Droid Bionic ku on your computer
Si aad u bilaabaan, xiriiriyaan phone in computer iyo hubiyo in si fiican la ogaan karaa. Markaas ordi barnaamijka oo guji "Start" furmo suuqa hoose si aad u hesho aad Motorola Droid Bionic shaqada kabashada sawir.
Step2. Sawirka photos tirtiray aad Motorola Droid Bionic
Waxaad phone halkaan ogaan doonaa oo soo bandhigay sida warqad drive ah. Waxaa Dooro oo guji "Scan" si aad u hesho sawiro tirtiray ah ee aad taleefan Motorola Droid Bionic.
Step3. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan sawirada tirtiray on telefoonada Motorola Droid Bionic
Scan ka dib, aad ogol yahay in ay ku eegaan oo dhan photos helay ka hor si loo hubiyo tayada. Markaas calaamadee kuwa aad rabto in aad dib u soo ceshano oo guji "Ladnaansho" in ay iyaga oo dhan la badbaadiyo on your computer ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday aad Motorola Droid Bionic telefoonka ama kaadhka xusuusta. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.
Video tutorial ee soo kabsaday sawiro ka Motorola Droid Bionic
In kabsaday photos tirtiray ee Motorola Droid Bionic
Sida a phone user Motorola Droid Bionic, waa in aad ogaato in ay jiraan sida caadiga ah tahay kaadhka xusuusta gudaha iyo kaarka SD ku qalabaysan telefoonka. Guud ahaan, waxyaabaha ay ka mid yihiin warbaahinta photos, videos iyo music ay ku kaydsan yihiin kaarka SD ah. Marka aad soo dirto "tirtirto" amarka, waxa ku jira baaba'aa ka card SD ah oo aadan meel ku arki kartaa. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay ka dhigantahay ma ay weligeedba way tageen. Qayb ka mid ah kaadhka oo meesha files tirtiray jiray waa la calaamadiyaa kaliya sida bannaan si loo badbaadiyo qolka files cusub, iyo tethe files tirtiray noqon aan la arki karin. Sidaa darteed, weli waxaad haysataa fursad wanaagsan oo ay ku soo kabsadaan photos tirtiray taleefanada Motorola Droid Bionic. Dabcan, si fiican ma waxaad ku dari lahaa files cusub in kaarka SD ah. Qabsashada sawiro cusub ama videos weligiis masixi doono kuwii hore.
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos ka Motorola Xoom
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka Samsung in Samsung
Top 15 Wareejinta Samsung Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato
6 Waxyaabaha ay tahay in aad Ogaato ku saabsan Samsung Kies 2.6
Sidee Waxaad ka LG wareejinta xogta si ay Android?
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Messages ka HTC EVO 4G
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos ka HTC Mid ka mid ah X / S / V